TSIANIHY : NAMETRAKA TANTARA RATSY TANY ATSIMO NY MPANONGAM-PANJAKANA – MyDago.com aime Madagascar
Nandritra izay efataona nitondran’ny mpanongam-panjakana izay hoy ny Ct Sazalahy Tsianihy teny amin’ny Magro Behoririka androany dia nametraka tantara ratsy tany amin’iny faritra Atsimo iny. Tsy takonafenina intsony Remenabila hoy izy ary ity indray ny rivodoza.Raha ny marina hoyizy dia tsy ny rivodoza no nahatonga ny any Atsimo ho tondra-drano fa ny renirano vaky. Tsy mbola tonga akory hoy izy ny rivodoza fa mbola aty Morombe dia efa tondra-drano Toliary. Tsy mety hoy Tsianihy ny nanaovan’ny teknisiana io fefiloha io fa tokony mbola hisy fanatsarana. Noho izany dia tomponandraikitra amin’ny fahafatesan’ny vahoaka any Toliary ny mpitondra fat, tsy afamiala amin’izany izy ireo. Mbola ho avy hoy izy ny hamalian’ny vahoaka ny tantara ratsy nanonganana ny filoha Ravalomanana Marc. Momba ny lisim-pifidianana dia nambarany fa ny olona miandraikitra izany dia nanongam-panjakana. Na misy na tsy hisy fifidianana hoy Tsianihy dia ny zanak’i Dada mila ao anaty lisitra. Momba ny fandalovan-dRajoelina tany Toliary dia nilaza izy fa mandositra eto Antananarivo Rajoelina fa mankany amin’ny sisiny, fa ho tonga hono Ramatoa Lalao Ravalomanana. Inona hoy ity zanak’i Toliary ity no handosirana sy hatahorana azy. Miresaha aminy raha sahy.
2 réflexions sur « TSIANIHY : NAMETRAKA TANTARA RATSY TANY ATSIMO NY MPANONGAM-PANJAKANA »
De gaga elah, kozy au moins nareo ato @ Magro izay nahazo toerana toy ny CT, CST sns. mba manana honnêteté intellectuel, raha za ny eo amin’ny toeranareo dia miala alou dia avy eo za manao taim-bava be mihintsy fa le vola tsy foy fa de ao ihany…. nefa nareo tsy maintsy hiantso an’i Andry Rajoelina oe President rehefa hihaona na oe hioresaka aminy izany oe rehefa tsy hitan’ny olona izany nareo de manaja an’i AR fa rehefa eo amason’ny olona de mody maty………….tssss le olona mbola mihaino anareo mihintsy no vendrana de manaiky izay teneninareo…. Mba ampianaro ihany ny ankizy re olona
si t es un vrai leader ,tu commences ton dicours et tu le termine comme suit:
Précédent Article précédent : MANOMBOKA MARARY SAINA RAJOELINA
Suivant Article suivant : Omer Beriziky donne son feu vert pour le retour du Mme Lalao RAVALOMANANA